Ukuthengisa izindlu nomhlaba kwi-Intanethi kuye kwavela | Martech Zone
Ukuthengisa izindlu nomhlaba kwi-Intanethi kuye kwavela
NgoMvulo, Julayi 6, 2009 NgoLwesibini, Matshi 1, 2016 Douglas Karr
Umzi mveliso weReal Estate wenze utshintsho olukhulu ngenxa yombhobho wezindlu (ochazwe apha), utshintsho lwetekhnoloji, kunye nolawulo oluthe kratya kwi-Intanethi. Iqamza kunye nokunyuka kunye nokuwa okumangalisayo kwemarike yempahla ebambise inyanzelise iiarhente zezindlu ukuba zilumke ngakumbi kutyalo-mali lwazo lwentengiso.
Itekhnoloji itshintshile nayo, nangona. Umdibaniso weselfowuni Itekhnoloji ye-Intanethi ibonelela ngeenkqubo ezinikezela ngearhente yokuthengiswa kwezindlu ezizizo, kubandakanya ukhenketho lokwenyani lwearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba, ukhenketho lwearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba, kunye notyelelo lwearhente yokuvakaliswa kwezindlu. Ezi nkqubo zazingenakufikeleleka kuMmeli wearhente yokuThengisa izindlu kwiminyaka embalwa edlulileyo- iarhente kuya kufuneka idibanise imikhosi nolunye ukhuphiswano kunokuba ibe nesicelo ngokwabo.
Nokuba uGoogle ungene kwi Umdlalo wokuthengisa izindlu nomhlaba ngoMeyi ophelileyo. Iiarhente kunye neepropathi zazo zinokungeniswa kuGoogle Maps Real Estate. Cofa kwiKhonkco lokuKhangela ekunene kwiqhosha leMephu zoKhangelo kwaye uluhlu lokuhla luya kuvela. Khetha Izindlu ezithengiswayo kwaye ufumana isicelo esomeleleyo:
Ngaphezulu kwe-56% yalo lonke uphando lwe-Intanethi kwi "real estate" kunye nemigaqo enxulumene nayo yenziwa kuGoogle nakwindawo zabo zamaqabane, ngokweGoogle. Ukutyhala idatha kuGoogle kunokuzenzekelayo usebenzisa i Idatha yeGoogle Base API.
tags: Idatha esisiseko kuGoogle apiGoogle +ukukhangela ekhayaUkuthengiswa kwezindlu nomhlabaizindlu ezithengiswayoukhenketho olubonakalayo
Sukuchitha imali eninzi kuyilo lwakho lweWebhu
NgoJulayi 7, 2009 ngo-7:38 PM
Inye kuphela into endinokuyikhankanya-ngendlela emnandi isishwankathelo: I-SMS iya ibaluleke kakhulu kwindawo yendawo yokuhlala. Usetyenziso luphezulu kwaye luyenyuka, kwaye xa ludityaniswe newebhu ephathwayo, amathemba kunye neengcali ze-RE ngokwenene bafumana eyona teknoloji yentengiso yanamhlanje. Owu, kwaye kwenzeka ndisebenzela inkampani eyenza oku. B)